Thwebula Mumble 1.2.12 – Vessoft
Hhumuza – a isofthiwe obusebenzayo yokukhulumisana yezwi. Izici eziyinhloko software zihlanganisa: izilungiselelo of umsindo, zokuxhumana group, ukuqoshwa ezingxoxweni, ukwengeza abasebenzisi abangane ohlwini njll hhumuza ngokuzenzakalelayo kwandisa ecacile of umsindo bese ususa nomsindo, ukuhlinzeka izinga elihle kakhulu yokuxhumana. Isofthiwe kuhlanganisa amathuluzi ukuphatha iseva wadala ikhono sokunika nobe imingcele amalungelo osebenzisayo. Hhumuza iqukethe module ukuthi luhlanganisa in imidlalo ezehlukene ezibonisa amalungu channel futhi ukhanyisa nabo ngesikhathi ingxoxo.
Lanikai voice yokuxhumana
Isethi olukhulu amathuluzi
Amazwana on Mumble:
Mumble Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... TeamSpeak 3.1.0.1 Client futhi 3.0.13.6 Server
Français, Español, Deutsch, 中文... ALLPlayer 7
Abadlali Media Umdlali newetinhloso anhlobonhlobo amathuluzi awusizo. Isofthiwe isekela ukudlala amafayela abonakele media, izilungiselelo eyisikhathi izihlokwana kanye ukumisa amafayela video.
Abashayeli Ithuluzi ukusebenza abashayeli kumadivayisi bangaphakathi nabangaphandle computer. Isofthiwe ngokuzenzakalelayo ihlaziya uhlelo lwakho for the driver iyatholakala ukuthuthukiswa.